आवाज नेपाल, December 6, 2018
काठमाण्डौँ । यौनप्रति हाम्रो विकृत सोंच छ । यौन भन्नसाथ त्यसलाई ‘छाडा’ भनेर नाक खुम्च्याउने प्रवृत्तिले यस सम्बन्धमा खुला बहस हुन सकिरहेको छैन । नतिजा, यौनकुण्ठा जस्ता मनोविकारले धेरैलाई ग्रस्त बनाइरहेको छ । खासगरी दाम्पत्य जीवनमा यौन सम्बन्धले खास महत्व र अर्थ राख्छ । यौन सम्बन्ध बनाउनु भनेको केवल बंश निरन्तरताका लागि मात्र होइन । […]
आवाज नेपाल, November 30, 2018
काठमाडौं । सरकारले विश्व एड्स दिवस देशभर जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाउने भएको छ । राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रले शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी शनिबार (भोली) विश्व एड्स दिवस जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी मनाउने जानकारी गराएको हो । डिसेम्बर १ का दिन हरेक वर्ष विश्वभर एड्स दिवस मनाउने गरिन्छ । यसै अवसर पारेर नेपालले […]
कण्डम यौनजन्य रोगदेखि एचआईभी संक्रमणबाट प्रभावकारी अस्थाई साधन हो। कतिपयले कण्डम लगाउँदा यौनक्रिडामा आनन्द आउँदैन भन्ने पनि गर्दछन् तर त्यसो होइन । कण्डमको सही छनौट र प्रयोगले तपाईले आफ्नो यौन जीवनलाई अझै रोमान्चक बनाउन सक्नुहुन्छ । त्यसैले यसको उपयोगिता सुरक्षाका लागि मात्रै नभएर मनोरञ्जनका लागि पनि हो भन्ने गरिन्छ। तर कण्डम किन्दा कुन कण्डम किन्ने […]
१. सार्वजनिक शौचालय जहाँ ड्याप्प बसेर शौच गर्नुपर्छ, त्यस्ता शौचालय प्रयोग गर्दा टिस्यू पेपर अथवा रुमाल प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ । त्यसो गर्दा कमोटमा अर्थात सतहमा रहेका किटाणुहरु तपाँईको शरीरमा पुग्दैन् । २. धेरै समय बाहिरी बाताबरणमा काम गर्दा गर्मी हुन्छ यौनाङ्गमा संक्रमण हुन सक्छ । त्यसैले त्यस्ता महिलाले दिनहुँ यौनाङ्ग सफा गर्ने गर्नुपर्दछ । […]
आवाज नेपाल, November 14, 2018
बीबीसी । एउटा प्रश्न तपाईँले लगाएको भित्री कट्टु कति दिनमा फेर्नुहुन्छ ? फेरेपछि धुनु हुन्छ नि रु तर हालै गरिएको एक सर्भेक्षणले गजवको नतिजा देखाएको छ । इन्टरनेट मार्केट रिसर्च पोर्टल युगोभले गरेको सर्भेका अनुसार ९३ प्रतिशत महिलाले एक पटक लगाएको आफ्नो भित्री कट्टु अर्को पटक लगाउनु अघि धुन्छन् । तर त्यस्तो बानी गर्ने पुरुषहरु […]
दुनियामा हरेक मानिसले सपना देख्ने गर्छन् । सपनाको प्रकृति भने फरक–फरक हुन्छन् । उसो त हरेक मानिसले हरदिन फरक–फरक प्रकृतिका सपना देख्ने गर्छन् । जीवनको अनुभव, असफल काम, चाहना, आफ्नो जीवनमा परेका दुःखद घटना आदिका आधारमा मानिसले सपना देख्ने गर्छ । कहिलेकाहीँ मानिसले कसैसँग शारीरिक सम्पर्कमा रहँदै गरेको पनि सपना देख्ने गर्छ । प्रायः युवाअवस्थामा […]
आवाज नेपाल, October 30, 2018
बाँके । बाँकेमा एचआइभी एड्सका बिरामी वर्षेनी बढ्दै गएका छन् । नयाँ तथ्याङ्कअनुसार जिल्लामा एक हजार १२ व्यक्ति एचआइभी सङ्क्रमित छन् । आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को असार मसान्तसम्म बाँकेमा ९६२ जना एचआइभी सङ्क्रमित रहेका थिए । त्यसकै कारण अहिलेसम्म बाँकेमा १२८ जनाको मृत्यु भएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य शाखाका हरि तिवारीले जानकारी दिनुभयो । कार्यालयका अनुसार […]
नेपालमा सेक्स टोय प्रयोग गर्ने दर्जनौं चर्चित कलाकारदेखि नेतासम्म
आवाज नेपाल, September 19, 2018
काठमाडौं । यौनका बारेमा व्यक्तिपिच्छे फरक–फरक बुझाइ हुन सक्छ, तर एउटा समान धारणा के हुन्छ भने सबै यसमा गोप्यता चाहन्छन् । यौन शरीरको यस्तो आवश्यकता र चाहना हो जसलाई मान्छेले सधैँ नियन्त्रणमा नराख्न पनि सक्छ।चाहेको वेला यौन चाहना पूर्ति नहुन पनि सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा विकल्पका रूपमा सेक्य टोयहरू रोजाइमा पर्न थालेका छन्। नेपालमा पनि […]
आवाज नेपाल, August 2, 2018
एजेन्सी । विज्ञान र प्रविधिले मानिसको जीवनशैली सहज बनाए पनि आफ्नो अस्तव्यस्त जीवनशैली र व्यस्तताले अहिले मानिसको स्वास्थ्य र सेक्स लाइफमा भयावह पैदा गरेको छ । विश्वमा कैयौं मानिसहरु यौन रोग जस्तो खतरनाक रोगको सिकार हुन पुगेको छ । भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसन्धान परिषद् आईसीएमआर र अमेरिकाको क्यालिफोर्निया युनिभरसिटीले गरेको एक अध्ययन अनुसार ८० प्रतिशत मानिस […]
आवाज नेपाल, July 30, 2018
शारीरिक सम्पर्कका बारेमा मानिसहरू खुलेर बहस गर्न चाहँदैनन् । कतिपय सेक्सबारेको समस्यासमेत बताउन नसक्दा गम्भीर रोगको सिकार पनि भइरहेका हुन्छन् । तर, शारीरिक सम्बन्ध मानिसका लागि आवश्यक त छ नै, यसले स्वास्थ्यमा अनेकौँ फाइदा पनि पुर्‍याउने गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ । शारीरिक सम्बन्धले स्किन र कपाललाई समेत सुन्दर र चम्किलो बनाउन भूमिका खेल्ने एक अनुसन्धानले […]